Melanin - Chii icho uye chii basa rainoita paganda redu | Bezzia
Melanin: Chii icho uye ibasa ripi rairi kuita?
Susana godoy | 12/05/2021 12:00 | Runako
Unoziva here chinonzi melanin? Chokwadi iwe wakazvinzwa kanopfuura kamwe chiitiko uye hazvishamise. Naizvozvo, kana iwe uine kusahadzika, nhasi zvichabviswa zvachose, nekuda kwezvose zvatinofanira kukuudza. Pasina kupokana, inyaya yakakosha kunyatso kukoshesa.
Nekuti zvese bvudzi redu neganda redu zvinotaurwa kana kubatanidzwa mazviri. Saka izvi pigment yechisikigo gara uchiita basa rakanaka. Kana muviri uchitishamisa pane dzimwe nguva uye ndosaka tichigara tichifanira kuve neruzivo rwese rwunokwanisika. Wagadzirira?
1 Chii chinonzi melanin uye basa rayo chii
2 Ndedzipi mhando dze melanin
3 Chii chinowedzera kugadzirwa kwemelanin
Chii chinonzi melanin uye basa rayo chii
Sezvatakambotaura, kunyangwe tichipfuura, tinogona kutaura izvozvo iyo yakasikwa zvachose pigment. Iye ari pamusoro pekuve neakawanda blonde kana brunette vanhu. Sezvo ndiani ari mutariri wekupa ruvara asi kwete chete kune iro ganda asiwo kune iro bvudzi. Saka isu tinogona zvakare kutaura kuti iro ganda reganda rinoenderana neuwandu hunogadzirwa nemunhu wega wega. Kutanga kubva pane izvi, ikozvino isu tinofanirwa kuziva kuti chii chiri basa muganda redu, kunyangwe zvanga zvatove pachena.
Nekuti iri basa hombe ndiyo chengetedza kana kudzivirira muviri kubva kuzuva, kutora radiation. Asi ichokwadi kuti dzimwe nguva hazvisi izvo chete zvakakwana, nekuti kana mwenje yeUVA ikasangana neganda, ivo vanowanzo oxidize melanin. Iko panguva iyo patinoona kuti ganda redu rinotaridzika sei rakapendwa asi harizogara kwenguva refu. Nekudaro, ichave iri UVB iyo inomutsa melanin uye semhedzisiro, isu tichava neyakasarudzika uye inogara-kwenguva tan. Asi chenjera, nekuti isu tinofanirwa kugara tichingwarira nezve izvi uye toshandisa dziviriro yezuva iyo isu tese tinoziva kare.
Ndedzipi mhando dze melanin
Zvino zvatave kuziva kuti chii uye basa chairo rinoita mumuviri wedu, isu zvakare tinoshamisika kuti mhando dzipi. Zvakanaka, iwe unofanirwa kusiyanisa pakati pemhando mbiri dzakakosha:
Eumelanins: Vane ruvara rwakasviba, izvo zvinoita kuti vara ravo rive rakasviba zvakare. Sezvo zvichinzi zvine sarufa.
Pheomelanins: Mune ino kesi, pigments dzayo dzakareruka, kunyangwe mune tsvuku uye zvakare yero toni, zvinoreva kuti sezvo iine sarufa yakawanda kupfuura yapfuura, mavara ayo anozoreruka zvakare.
Nyanzvi dzinoti isu tese tine huwandu hwakaenzana chaizvo hwemelanocytes. Asi zvinoitika ndezvekuti izvi hazvigovaniswe nenzira imwechete mumuviri wese.
Chii chinowedzera kugadzirwa kwemelanin
Nenzira yechisikigo, tinogona zvakare kumisikidza kana kuwedzera kugadzirwa kwayo, saka ndiyo imwe yemazano makuru ekufunga nezvayo. Nenzira iyi, isu tinongofanirwa kudya zvimwe zvekudya zvinotibatsira uye ichava imwe yedzakareruka nzira dzekuzvitarisira isu uye ganda redu.
Iyo karoti inogara iripo mune idzi kesi. Zvirokwazvo wagara uchizvinzwa, zvakanaka, izvi imhaka yekuti have beta carotenes and these make there more production. Rangarira kuisa makarotsi mundiro dzako asi nguva dzose usati wazviratidza kuzuva.
tomaatti: Kana karoti ainayo, madomasi haasi kumashure kumashure futi. Ehe, iwo zvakare sosi ye beta-carotene, saka ivo vanokurudzirwawo kuti vape kugadzirwa kwemelanin.
Pescado mumidziyo yako mikuru: Rangarira kuti pamusoro pekuva sosi yakanaka yemaminerari uye mavitamini, tinosimbisa D uye E nekuti ndivo vari mutariri wekutichengetedza. Tuna ichagara iripo seyakaiprotein uye sechikafu chine mavhitaminzi ataurwa pamusoro.
Dzungu: Zvakare chii chakaitika nematomatisi kana makarotsi. Kudzivirirwa kwayo kwakanyanya, saka zvinokurudzirwa kutora zuva rimwe chete tisati tazviratidza kune zuva.
Tora chinyorwa chakanaka uye gara uchitarisira ganda rako kuti urege kumwe kukuvara. Iye zvino une ruzivo rwawaida!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Runako » Melanin: Chii icho uye ibasa ripi rairi kuita?
Nzvimbo dzaunofanira kushanyira kuchamhembe kwePortugal